Cheka mavhidhiyo nenzira yakapusa uye ine simba muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekucheka mavhidhiyo
Vazhinji vashandisi vanoda kuziva kuti vanogona sei cheka uye unama mavhidhiyo kana zvidimbu nyore kubva kune yako GNU / Linux kugovera. Uye zvirokwazvo kune dzimwe nzira dzakawanda dzekugona kucheka mavhidhiyo evhidhiyo wozobatana navo kana tichida kana kungoshandisa iwo mavhidhiyo zvakasiyana. Mune ino dzidzo isu tinotsanangura nzira dzinoverengeka dzakareruka dzekuzviita nhanho nhanho, nekuti zvinoshanda chaizvo kana isu tichingoda kutora chikamu chevhidhiyo chinotifadza kana kungobvisa zvimwe zvidimbu zvatinoda kudzivirira.
Kucheka mavhidhiyo evhidhiyo kunotibvumidzawo kuti tive nezvimedu zvekushanda nazvo nechirongwa chekugadzirisa, tichijoinha navo uye kugadzira kollaji yerudzi vhidhiyo. Semuenzaniso, paYouTube tinoona zvimwe zvezvinyorwa izvo zvinongoda kuziva, kana zvinoshandiswa pakuratidzira kana kushamisa vanhu nekutora zvidimbu zvezviitiko zvakanyorwa pavhidhiyo zvakakosha kumunhu iyeye, nezvimwe. Ichokwadi ndechekuti mikana yakawanda, kunyangwe isu tisingazotsanangure maitiro ekugadzira iyi mhando yekuumbwa uye isu tichango gumira pakurondedzera nzira dzakasiyana dzekucheka mavhidhiyo.
1 Cheka mavhidhiyo uchishandisa chirongwa chine graphical interface:
1.1 Uchishandisa Avidemux:
1.2 Uchishandisa VidCutter:
2 Cheka mavhidhiyo kubva pamutsetse wekuraira:
Cheka mavhidhiyo uchishandisa chirongwa chine graphical interface:
Pane sarudzo dzakawanda kuzviita nenzira yakasununguka, yakajeka uye inokurumidza, asi isu takasarudza maviri ezvinonyanya kufadza.
Iko kushanda kwe Avidemux Zviri nyore kwazvo. Ichi chirongwa chemahara chekugadzirisa vhidhiyo chakanyorwa mumutauro weC / C ++, uchishandisa maraibhurari eGTK + neQt pakuonekwa kwazvo. Iyo inotsigira akasiyana mafomati edhiyo uye inoshanda muchinjika-chikuva, iine mushe mushe kuita. Kuyera mavhidhiyo isu tinongotevera matanho:
Isu tinoita Avidemux.
Tinodhonza iyo vhidhiyo iyo yatinoda kucheka mukati meiyo Avidemux interface kana isu tinosarudza iyo kuti ivhure kubva kumenyu.
Nerubatsiro rwe vhidhiyo yenguva bar tinogona kuifambisa uye kusarudza chikamu chevhidhiyo chatinoda kucheka.
Tinofanira kumaka kukumbira yevhidhiyo ine A bhatani uye magumo neB bhatani.
Tiri kuenda Archive, Sevha, Sevha se, kuchengetedza iyo yakatemwa.
Kana tangova nezvikamu zvakatemwa tinokwanisa gadzira chimiro uchivabatanidza neAvidemux. Kungodhonza mavhidhiyo ega ega kuitira rimwe nerimwe mukati meiyo Avidemux interface uye ivo vanozobatanidzwa, uyezve nekuchengetedza mhedzisiro mune imwechete monolithic video ...
VidCutter Ichi chirongwa chekupuratifiza vhidhiyo yekugadzirisa, kuti tikwanise kuiisa pane yedu GNU / Linux kugovera. Nayo unogona kucheka uye kujoina mavhidhiyo mune imwe nzira iri nyore nekuda kweiri yayo yakajeka graphical interface. Vagadziri vacho vashandisa Qt5 nePython kuvandudza kwavo, uye inoshandisa zvinoyevedza zveiyo yakasimba ffmpeg chishandiso icho chakavakirwa kushanda mukukodha uye kudhizaina kwevhidhiyo zvinhu, kutsigira mafomati akakurumbira seFLV, MP4, AVI uye MOV ..
Iyo yekushandisa interface iyo VidCutter inopa inogadziriswa nemushandisi, saka iwe unogona kushandisa akasiyana ekuona madingindira uye hombe nhamba yezvirongwa kugadzirisa maturusi aripo uye vhidhiyo yekugadzirisa nharaunda, kuchinjika kune yako kuravira uye zvaunoda. Shanduko hadzidi mamwe marongero kuti ashande, saka ruzivo rwevashandisi rwunozoita sekubudirira uye nyore sezvinobvira. Kucheka vhidhiyo zvakapusa:
Isu tinomhanya chirongwa ichi VidCutter.
Isu tinovhura vhidhiyo kuti tinoda mutengo.
Tinogona kushandisa chimiro chayo kuti tiridze vhidhiyo uye tiende pane chaipo patinoda kucheka. Kana tangoona kwatinoda tanga clip, isu tinomaka mune iyo nguva bhaa uye tinya Start.
Ipapo tinofanira sarudza kupera kweiyo vhidhiyo clip, Makorari End.
Pakupedzisira tinodzvanya bhatani Sevha kusevha shanduko uye tatova nedare redu.
Uye zvakare, iwe unogona zvakare kujoina akacheka mavhidhiyo evhidhiyo, uchiita kuti nziyo dzako dzive nyore uye nekukurumidza, kunyangwe kuisazve iwo mavhidhiyo kune edu ekuda. Kucheka kwacho kuchange kuri kwekutenda tekinoroji inonzi SmartCut yekuvandudza izvo zvataurwa. Pakati pekushanda kwayo tinowonawo kuti injini yayo yekutamba inobvumidza iwe kuona mhedzisiro, nekuda kweiyo hardware yekumhanyisa system inoenderana ne libmpv raibhurari uye vhidhiyo kugadzirisa inotsigirwa pamusoro peOpenGL. Nezve iyo vhidhiyo kutumira kunze, inowanzo bvumidza iwe kusevha iyo vhidhiyo mune imwecheteyo fomati sosi yayo
Cheka mavhidhiyo kubva pamutsetse wekuraira:
VidCutter yaive yakavakirwa pamashandiro effmpeg nekuda kwesimba racho. Takatonyora nezvazvo chine simba ffmpeg chishandiso rinova banga remauto eSwitzerland rezvinhu zvakawanda, richishanda nemafaira edu eema multimedia kushandura pakati pemafomati, macodec, kugadzirisa mavhidhiyo akaora sezvaunoziva iwe, uye kunyangwe sezvatichaona izvozvi, zvakare kukwanisa kucheka zvidimbu zvevhidhiyo nenzira yakapusa.
Para cheka vhidhiyo clip tinogona kushandisa sarudzo dzinoverengeka. Semuenzaniso, mune yekutanga kesi tinogona kuzviita pasina kuisazve encoding kana mune yechipiri kuisazve encoding iyo. Ziva kuti iwe unongofanirwa kuve kujekesa nezve yekutanga uye yekupedzisira nguva yeiyo clip, semuenzaniso, fungidzira kuti iri kubva 00:05:00 kusvika 00:07:00:
ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:05:00 -t 00:07:00 -c copy nombre_final.mp4
ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:05:00 -t 00:07:00 -async 1 -strict -2 nombre_final.mp4&amp;amp;lt;/pre&amp;amp;gt;
Nenzira, kana iwe uchida kuona iyo codec runyorwa inowanikwa iwe unogona kushandisa:
ffmpeg -formats -E
Kana iri nyaya ye mencoder, zvakare chishandiso chine simba icho chatinogona kuita mashandiro mazhinji, mune ino nyaya tichicheka mavhidhiyo sezvatakaita neffmpeg. Kuti uite izvi, unogona kungoisa iwo unotevera kuraira:
mencoder -ss 00:05:00 -endpos 00:07:00 -oac copy -ovc copy video.mp4 -o corte.mp4
Mune nyaya yekuda kubvunza iyo codec runyorwa inowanikwa mune mencoder, unogona kushandisa:
Ndinovimba yakabatsira iwe uye iwe wakadzidza kucheka mavhidhiyo. Usakanganwa kutaura ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Maitiro ekucheka mavhidhiyo
Iwe unogona zvakare kushandisa VLC, handiti?
Yekutanga uye Yemahara Malagueños akadaro
Vidcutter inogona kuiswa isina kuwedzera imwe ppa:
Pindura kune Yekutanga uye Mahara Malagueños
Pindura kuti exgoe.com
Kwaziso uye makorokoto pane iro rakakura bhuku re «Maitiro ekucheka mavhidhiyo #. pawebhu "https://www.linuxadictos.com/cortar-videos.html." . Apa ndinokumbira zvikuru kuti mundibatsire nemutsa nzira yekucheka mapfupi uye marefu mavhidhiyo (1 awa, maawa maviri, maawa matatu uye nezvimwe) chero emafomati akasiyana (mpg, avi, mp2 nevamwe). Kuti uwane rumwe ruzivo rwakanakisa ini ndoda kucheka mavhidhiyo e3, 4, 1 maawa kana kupfuura kune zvikamu zvenguva zve 2 masekondi, kubvira nguva iyoyo nguva ndiyo yainogamuchira seyakaganhurirwa kukwanisa kuiisa kubva kune yangu android nhare kune yangu WhatsApp chinzvimbo. . Ndokusaka ndichidzokororazve chikumbiro changu chambotaurwa.
Ndatenda pamberi pezve mutsa wako, rubatsiro uye nekukurumidza mhinduro.
ONA: Ndapota, ini ndoda kuita maitiro aya kuburikidza neiyo linux terminal.
Mukuru ndinokutendai zvikuru
Zvakanaka ndinokutendai zvikuru!
Maitiro ekuchenesa mapakeji muArch Linux
Gonesa browser rako reFirefox kuti riwedzere